Fahasamihafana eo amin'ny asidra acetic sy acetate | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny asidra acetic sy acetate | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / Simia biolojika / fahasamihafana eo amin'ny asidra acetate sy asidra
Fahasamihafana eo amin'ny asidra acetic sy acetate
20 aprily 2018 Narotsak'i Madhu
Fahasamihafana lehibe - Acid Acetic vs Acetate
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra acetic sy acetate dia ny asidra acetic dia fitoviana tsy miandany ary ny acetate dia anion manana fihenan'ny herinaratra ratsy .
Ny asidra acetic dia fitambarana biolojika iray izay manampy amin'ny fanamboarana vinaingitra raha ny acétate ion kosa dia ny fotony mampifangaro ny asidra acetic. Ny tena zava-dehibe dia ny fananganana ny ion acétate dia miseho amin'ny alàlan'ny fanesorana ny atôniômanômanôma ao amin'ny vondrona carboxylic an'ny asidra acétika.
2. Inona no Acetic Acid
3. Inona no atao hoe Acetate
4. Fampitahana mifanila - Acidate Acetic vs Acetate amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Acetic Acid?
Ny asidra acetic dia fitambarana biolojika manana ny endrika simika CH 3 COOH . Ny habetsahan'ny molar amin'ity fitambarana ity dia 60 g / mol raha ny anaran'ny IUPAC an'io fitambarana io dia asidra Ethanoic . Ankoatr'izay, amin'ny hafanan'ny efitrano, ny asidra acetic dia ranoka tsy misy loko misy tsiro marikivy. Ny cetic sokajy asidra dia ho toy ny carboxylic asidra vokatry ny fisian'ny carboxylic vondrona asidra (-COOH).
Sary 1: Molecule Acid Acetic
Ny asidra acetic glacial dia endrika asidra acetic mifangaro. Ankoatr'izay, ny asidra acetic dia misy fofona manitra, izay mitovy amin'ny fofon'ny vinaingitra sy tsiro marikivy mampiavaka azy koa. Izy io koa dia asidra malemy satria mizara ampahany amin'ny vahaolana aqueous, mamoaka anion acetate sy proton. Ny asidra acetic dia misy proton iray tsy azo afangaro isaky ny molekiola. Na izany aza, ny asidra glasy dia manelingelina izay manimba tena tokoa.
Ny asidra acetic dia asidra karboksilika tsotra; raha ny marina dia asidra karboksilika tsotra faharoa io. Ao amin'ny fanjakana asidra asetika, ny molekiola dia mamolavola molekiola amin'ny alàlan'ny fatorana hidrogen. Na izany aza, amin'ny dingana etona amin'ny asidra acetic dia mamorona dimers (molekiola roa mifamatotra amin'ny alàlan'ny fatorana hidrôzenina). Satria solvent polar protic ny asidra acététique dia tsy azo ihodivirana amin'ny solventsana polar sy nonpolar maro.
Inona no atao hoe Acetate?
Ny acetate dia zezika namboarina avy amin'ny fanesorana ny hidrôzenina avy amin'ny asidra acetic. Ity anion ity dia manana fiampangana ratsy net (ny fiampangana dia -1 vokatry ny famotsorana proton iray). Ny ion acetate dia tsy afaka mijanona ho toy ny fitambaran'olona iray noho ny fiampangana azy, izay mihetsika be. Noho izany dia misy toy ny sira amin'ny metaly alkaly izy io . Ny ion acetate dia ny fotony mifangaro amin'ny asidra acetic, izay vokatr'izany avy amin'ny fisarahana ny asidra acetic.
Sary 2: Anion Acetate
Ny endrika simika anion'io anion io dia C 2 H 3 O 2 - raha ny anarany IUPAC dia etanoat . Ankoatr'izay, ny habetsahan'ny moleta acetate dia 59 g / mol. Manokana, amin'ny sanda pH ambonin'ny 5.5, ny asidra acétate dia misy toy ny anion acetate, mamoaka proton ho azy. Izany dia satria, amin'ny pH avo, ny ion acetate dia miorina noho ny asidra acetic.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny asidra acetic sy acetate?
Acetic Acetic vs Acetate
Ny asidra acetic dia fitambarana biolojika manana ny endrika simika CH 3 COOH. Ny acetate dia zezika namboarina avy amin'ny fanesorana ny hidrôzenina avy amin'ny asidra acetic.
Ny habetsahan'ny molar asidra acetic dia 60 g / mol. Saingy ny habetsahan'ny moleta acetate dia 59 g / mol.
Ny asidra acetic dia tsy misy sarany. Acetate dia manana fiampangana ratsy.
Ny asidra acetic dia molekiola biolojika. Ny acetate dia zezika organika.
Ny molekiola asidra acetic dia miorina amin'ny sanda pH ambany (manodidina ny PH 5). Ny ion acétate dia miorina amin'ny sanda pH avo (avo kokoa noho ny pH 5.5).
Famintinana - Acetic Acetic vs Acetate
Ny asidra acetic dia asidra karboksilika tsotra faharoa. Ny acétate kosa dia anion izay azo avy amin'ny asidra acetic. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny asidra acetic sy acetate dia ny asidra acetic dia fitoviana tsy miandany ary ny acetate dia anion manana fihenan'ny herinaratra ratsy.
1. “Acetic Acetic.” Wikipedia, 18 Apr. 2018, Azo zahana eto .
2. “Acetic Acetic.” Ivotoeram-pirenena ho an'ny fampahalalana momba ny biotechnology. PubChem Compound Database, Tranombokim-pirenena momba ny fitsaboana amerikana, azo jerena eto .
3. "Acetate." Wikipedia, 10 Apr. 2018, Azo zahana eto .
1. "Acetic-acid-2D-skeletal" (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. "Acetate-anion-canonical-form-2D-skeletal" (Public Domain) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny asidra acetic sy asidra acetic glacial Fahasamihafana eo amin'ny asidra acetic sy vinaigitra Fahasamihafana eo amin'ny Ethanol sy Ethanoic Acid Fahasamihafana eo amin'ny asidra methanoika sy asidra Ethanoic Fahasamihafana eo amin'ny karbaona Allylic sy Vinylic
Filed Under: Chemical Organic Tagged With: Acetate , Acetate ion , Acetate Properties , acetic acid , Acetic Acid Properties , Acetic Acid vs Acetate , carboxylic acid , CH3COOH , Ethanoate , ethanoic acid
Fahasamihafana teo amin'ny lasa sy taloha
Fahasamihafana eo amin'ny karbohidraty sy ny proteinina
Fahasamihafana eo amin'i Siberian Husky sy Malamute
Fahasamihafana eo amin'ny carte de crédit sy ny ISIS Mobile Wallet
Fahasamihafana eo amin'ny mineraly sy ny singa